Zuva raamai muRussia | Absolut Kufamba
Zuva raamai muRussia
Zuva raAmai izororo rakasarudzika iro rinopembererwa pasi rese kurangarira vanaamai vese nekupa kutenda nerudo uye dziviriro yavanopa vana vavo kubva pakuzvarwa
Sezvo iri mhemberero yepasi rese, munyika yega yega inopembererwa pamazuva akasiyana, kunyangwe kazhinji kazhinji iri Svondo yechipiri muna Chivabvu. Zvisinei, Zuva raAmai muRussia rinoitika pane rimwe zuva. Ungade here kuziva kuti inopembererwa sei munyika ino?
1 Zuva raamai riri sei muRussia?
2 Chii chakatangira Zuva raAmai?
3 Zuva raAmai rinopembererwa rini mune dzimwe nyika?
3.8 Portugal neSpain
Zuva raamai riri sei muRussia?
Zuva raAmai muRussia rakatanga kupembererwa muna 1998, parakabvumidzwa nemutemo pasi pehurumende dzaBorís Yeltsin. Kubva ipapo yakaitwa paSvondo yekupedzisira yaMbudzi gore rega.
Sezvo iri iri mhemberero nyowani muRussia, hapana tsika dzakasimbiswa uye mhuri yega yega inoipemberera nenzira yavo. Nekudaro, vana vanogadzira makadhi ezvipo uye neakagadzirwa nemaoko yekutenda vanaamai vavo nerudo rwavo uye nekutaura zvavanonzwa.
Vamwe vanhu vanoita chikafu chemhuri chakakosha uko kwavanopa vanamai ruva rakanaka remaruva echinyakare sechiratidzo chekutenda kwavo, ichiperekedzwa neshoko rerudo.
Chero zvazvingaitika, chinangwa cheZuva raAmai muRussia ndechekusimudzira hunhu hwemhuri uye zvakadzama zvinoreva rudo rwaamai kuvana vavo uye zvinopesana.
Chii chakatangira Zuva raAmai?
Tinogona kuwana mavambo eZuva raAmai muGirisi yekare makore anopfuura zviuru zvitatu apfuura apo mhemberero dzakaitwa mukuremekedza Rea, iyo titanic amai vevamwari yakakosha saZeus, Hadhesi naPoseidon.
Nyaya yaRea inotaura kuti akauraya murume wake Cronos kuchengetedza hupenyu hwemwanakomana wake Zeus, nekuti akange adya vana vake vekare kuti asazobviswa pachigaro cheushe sezvaakaita nababa vake Uranus.
Kudzivirira Cronos kubva pakudya Zeus, Rea akaronga zano uye akaviga dombo nemanapukeni kuti murume wake adye, achifunga kuti ndiye mwanakomana wake paainyanya kukura pachitsuwa cheKrete. Zeus paakazova munhu mukuru, Rea akakwanisa kuita kuti Cronus anwe mushonga waiita kuti vamwe vana vake varutse.
Nekuda kwerudo rwaakaratidza kuvana vake, maGreek akamuteresa. Gare gare, maRoma pavakatora vanamwari vechiGiriki vakatorawo kupemberera uku uye pakati paKurume zvipo zvakapihwa kwemazuva matatu kuna mwarikadzi Hilaria mutembere yeCibeles muRome (inomiririra Nyika).
Gare gare, maKristu vakashandura zororo iri rine mavambo echihedheni kuita rakasiyana kukudza Mhandara Maria, amai vaKristu. Mune vatsvene veKaturike musi waDecember 8 iyo Immaculate Conception inopembererwa, zuva rakagamuchirwa nevakatendeka ava kurangarira Zuva raAmai.
Yatova muzana ramakore makumi maviri, mutungamiri weUnited States Woodrow Wilson akazivisa muna 1914 Svondo yechipiri yaMay sezuva repamutemo raAmai, chiitiko chakanzwikwa mune dzimwe nyika zhinji dzepasi. Nekudaro, dzimwe nyika dzine tsika yechiKaturike dzakaramba dzichichengeta zororo iri muna Zvita kunyangwe Spain yakaripatsanura kuti riendese kuSvondo yekutanga muna Chivabvu.
Zuva raAmai rinopembererwa rini mune dzimwe nyika?
Nyika ino inopemberera Zuva raamai paSvondo rechipiri muna Chivabvu. Wekutanga kuzviita nenzira yatinoziva kuti aive Anna Jarvis mukuremekedza amai vake vanonoka muna Chivabvu 1908 muVirginia. Gare gare akaita mushandirapamwe wekusimbisa Zuva raAmai sezororo renyika muUnited States uye nekudaro zvakaziviswa muna 1910 muWest Virginia. Ipapo dzimwe nyika dzaizokurumidza kutevera.
MuFrance, Zuva raAmai itsika yazvino, kubvira payakatanga kupembererwa mumaXNUMX. Izvi zvisati zvaitika, mamwe mazuva kuyedza kwevamwe vakadzi avo vakabereka vana vakawanda kubatsira kudzoreredza huwandu hwenyika hwakapera mushure meHondo Huru kwakazivikanwa uye kutopihwa menduru dzekukodzera.
Parizvino inopembererwa paSvondo yekupedzisira muna Chivabvu kunze kwekunge yaenderana nePendekosti. Kana zvirizvo, Zuva raamai rinoitika paSvondo yekutanga muna Chikumi. Chero iri zuva racho, chinhu chetsika ndechekuti vana vape vanamai vavo keke muchimiro cheruva.
Munyika ino yeAsia, Zuva raAmai zvakare kupemberera kutsva, asi vanhu vazhinji vechiChinese vari kupemberera Svondo yechipiri muna Chivabvu nezvipo nemufaro wakawanda naamai vavo.
Zuva raamai rinorangarirwa muMexico nechido chikuru uye izuva rakakosha. Mhemberero inotanga zuva rapfuura kana iri tsika yekuti vana vadzikise amai vavo kana vanambuya, kungave vega kana nekuhaya masevhisi evaimbi vanehunyanzvi.
Mangwana acho musangano unokosha wekereke unoitwa uye vana vanopa vanaamai vavo zvipo zvavakagadzirira kuchikoro.
Mambokadzi Amai veThailand, Her Majness Sirikit, vanoonekwawo saamai vevadzidzi vake vese veThai saka hurumende yenyika yapemberera Zuva raAmai pazuva rekuzvarwa kwavo (Nyamavhuvhu 12) kubva 1976. Izororo renyika iro rinopembererwa musitayiti nemabasa emoto uye makenduru mazhinji.
Zuva raAmai muJapan rakawana mukurumbira mukuru mushure meHondo Yenyika II uye parizvino inopembererwa paSvondo yechipiri muna Chivabvu.
Zororo iri rinogarwa nenzira ine hunhu uye yechinyakare. Kazhinji vana vanodhirowa mifananidzo yaamai vavo, kugadzirira ndiro dzavakavadzidzisa kubika uye nekuvapa mapinki kana machena machena sezvo vachimiririra kuchena uye kutapira.
Zuva raamai muna UK nderimwe remazororo ekare muEurope. Muzana ramakore rechi XNUMX, Svondo rechina reLent rakadaidzwa kunzi Svondo raMai mukukudza Mhandara Maria. uye mhuri dzakatora mukana wekuti dzive pamwe chete, kuenda kumisa uye kuswera pamwe chete.
Pazuva rinokosha iri, vana vanogadzirira zvipo zvakasiyana kuna vanamai vavo asi kune imwe isingagone kupotsa uye iri Simnel Cake, keke rinonaka remichero rine rukoko rwemaarimondi kumusoro.
MuSpain nePortugal zvese, Zuva raAmai raimbopembererwa musi waZvita 8 pachiitiko cheMweya Wakachena asi rakazopatsanurwa uye mhemberero mbiri dzakaparadzaniswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Zuva raamai muRussia
Ndeapi makambani makuru eAustralia?